Dilalka Soomaalida loogu geysto Koonfur Afrika oo kordhaya | KEYDMEDIA ONLINE
Dilalka Soomaalida loogu geysto Koonfur Afrika oo kordhaya
Tacadiyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, loogu geysanayo dalka koonfur afrika ayaa kordhaya, iyadoo xalay dalkaasi lagu dhibaateeyey muwaadiniin Soomaaliyeed.
JOHANNESBURG, Koonfur Afrika - Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Koonfur Afrika, waxaa xalay dalkaasi lagu dilay nin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay, Cabdi Jimcaale Cali Dable, kaas oo ay dileen burcad Koonfur Afrikaan ah, kuwaa oo doonayey in ay dhac u geystaan.
Burcada ayaa soo weerartay xilli uu joogay dukaan uu ku lahaa deggaanka Soweto ee duleedka magaalada Johannesburg, waxana dukaanka ilinkiisa sidoo kale lagu dhaawacay Wiil Soomaaliyeed, oo lagu magacaabayey Axmed Cabdullaahi Cali.
Wiilka dhaawacmay ayaa loola cararay xarun caafimaad, halkaas oo lagu dabiibayo xaaladiisa, iyadoo sidoo kalana maanta la aasayo meydka muwaadinka Soomaaliyeed ee xalay lagu dilay dalkaasi.
Booliska Koonfur Afrika oo gaaray halka ay mashaqadu ka dhacday, ayaa sameeyey howlgallo aan cidna lagu soo qaban, waana kuwa u muuqda in ay iska indha tirayaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaaliyeed.
Burcadii xalay ayaa sidoo kale dhac fara badan u geysatay dukaamo ku yaalla duleedka Johannesburg, oo ay dad Soomaaliyeed leeyihiin, waxaana Cabdi Jimcaale Cali Dable, uu noqonaya muwadiinkii ugu horeeyey ee sanadkan billawga ah dil loogu geysto dalka Koonfur Afrika.